Izikebhe zasebusika, manje yisikhathi sokubakhetha | Izikebhe ze-Absolut
Izikebhe zasebusika, manje yisikhathi sokubakhetha
U-Ana Lopez | | Amathiphu, Ukugeleza
Ekucabangeni kwethu sinezikebhe zelanga kanye nezinsuku ezinde zasehlobo ezihlobene, kepha kukhona enye indlela yokuthokozela izakhiwo nezindawo ezimangalisayo, kumayelana nokwenza Ukuhamba ngesikebhe ebusika lapho ukuhlala kungaphansi futhi amanani entengo ayabiza kakhulu… Yize kulo mqondo ungathola nezimanga, ngoba uKhisimusi nokuphela konyaka kuyisikhathi esiphezulu sezikebhe. Zithathwa njengezikebhe zasebusika, enyakatho Nenkabazwe, kusuka ngo-Okthoba kuya kuMashi.
Noma manje sesingena ehlobo, lesi yisikhathi esihle sokubhuka umkhumbi wakho wasebusika uye eCanary Islands, eYurophu, e-Asia, eNew Zealand… Ake umangale ngezindawo ezikude ezifana nesibonelo i-Easter Island.
1 Izindawo zokunethezeka ebusika
2 Izikebhe zomfula ebusika
3 Yenza isikhathi sokuphumula, kusuka ebusika kuya ehlobo
Izindawo zokunethezeka ebusika
Njengoba ngishilo ngaphambili, ubusika yisikhathi esihle sokuthola izindawo ezingavamile nezindawo njenge-United Arab Emirates, India, noma i-Asia… .kufanele ube nesikhathi esincane futhi lezi zikebhe, ezisuka eBarcelona, isikhathi esimaphakathi samasonto amathathu. Uma ungenaso isikhathi esiningi sokuzulazula futhi ufuna ukufika kulezi zindawo ezikude, inketho ukundiza uye ethekwini lokuqalisa, kepha-ke, uzophuthelwa ingxenye enkulu yohambo nokujabulela umkhumbi uqobo. Sikunikeza ucezu lolwazi: ebusika umsebenzi wezikebhe ungaphansi ngo-15%, ngakho-ke yonke into ishesha futhi izole.
Isikebhe esimnandi sokunethezeka emfuleni iBrahmaputra eNdiya
Ngokuqondene ne intengo, uma siqhathanisa lezi zindawo ehlobo nobusika, intengo yazo incishiswe cishe ngama-25%, okunikeza izinketho zokuqasha ukuvakasha okuningi noma uthuthukise ikhabethe lakho. Izintengo ezihamba phambili ziphakathi kokuphela kukaNovemba noKhisimusi. Ukukunikeza ireferensi eyodwa nje, kusukela ngoNovemba 23 kuya ku-30, ukuhamba ngomkhumbi odabula iMaldives, egumbini elijwayelekile eliphindwe kabili, kufaka phakathi indiza, kungabiza cishe ama-euro angama-600 umuntu ngamunye, ungakukholwa? Ziyizintengo ezithakazelisa ngempela.
Izikebhe zomfula ebusika
Enye inketho ethakazelisa kakhulu ebusika ukuhamba ngomfula emifuleni emikhulu yaseYurophu. Zithandwa kakhulu izindawo ezimaphakathi neYurophu, iRhine, iDanube, iSeine.
UKhisimusi no-Eva Wonyaka Omusha kubhekwa njengenkathi ephakeme, amadolobha mahle futhi naleyo ntelezi kaKhisimusi kanye nezimakethe. Kepha uma uhamba ngemuva kokuphela konyaka, noma ezinsukwini zokuqala zikaDisemba, uzokujabulela into efanayo, nabantu abancane.
Uma ungalokotha kuze kube nguNovemba ungathatha uhambo oluya eVolga futhi uvakashele amadolobha amakhulu aseRussia izinsuku eziyi-11, cishe ama-euro angama-700 umuntu ngamunye, kufaka phakathi indiza, uhambo namathiphu. Vuliwe Lesi sihloko uzothola isibonelo sokuhamba ngomkhumbi emadolobheni amakhulu aseRussia.
Uma ungakaze wenze i-cruise cruise, ngincoma isipiliyoni, kungenye indlela yokuhamba, ngokukhululeka kakhulu nangayo yonke induduzo yokufinyelela ezikhungweni zedolobha ngokushesha.
Yenza isikhathi sokuphumula, kusuka ebusika kuya ehlobo
Uma into yakho ukulandela ihlobo futhi ungabandi nhlobo ngaleso sikhathi, khumbula lokho eningizimu Nenkabazwe kusehlobo. Isikhathi salolo hambo oludabula i- ICaribbean, iNingizimu Melika, iHawaii, iNingizimu Afrika, i-Australia, iNew Zealand, noma i-Antarctica eyihlane ... yize kulokhu okulandelayo, ungeke uthole ukushisa okukhulu, kepha uhambo oluhle kakhulu lokuvakasha olungeke ukwazi ukulwenza nganoma isiphi esinye isikhathi kunasebusika lapha.
Indawo esiyithola ikhanga kakhulu ngesikhathi sasehlobo sasebusika (ebusika eNyakatho Nenkabazwe) yi I-Patagonia yase-Argentina noma yaseChile, lapho ongabona khona ama-fjords noma ahle kakhulu kunalawo aseNorway.
Into elula ukuhamba kuze kube yileli hlobo lasehlobo ukukhetha imithwalo: i-sunscreen, isigqoko, izimbadada, izikhindi, ama-swimsuits, izikibha, amalokwe amahle, ne-voila.
Siyethemba ukuthi le mibono ikukhuthaze ukuthi ubhukhe umkhumbi wakho olandelayo wasebusika.
Indlela ephelele ye-athikili: Izikebhe ze-Absolut » Izinhlobo zokuhamba ngesikebhe » Ukugeleza » Izikebhe zasebusika, manje yisikhathi sokubakhetha
Abasebenza emkhunjini: ngubani futhi yini umsebenzi wabo
Iyini iNorovirus futhi ivinjelwa kanjani emikhumbi ye-cruise?